Samsung စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကဘက်ထရီအား Galaxy Note7မီးလောင်မှုများတွင်အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် Androidsis
Reuters သတင်းဌာန၏ဖော်ပြချက်အရ Samsung ၏ Galaxy Note7မီးလောင်မှုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းအား Samsung မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ အေဂျင်စီ၏အဆိုအရ Samsung စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပါအ ၀ င်အားလုံးသိပြီးဖြစ်သောအရာတစ်ခုအားနိဂုံးချုပ်လိုက်သည် ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က: အဆိုပါဘက်ထရီမီးများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ Galaxy Note7ကိုပထမဆုံးပြန်လည်သိမ်းဆည်းစဉ်အတွင်းကုမ္ပဏီကစမတ်ဖုန်းများ၏ဘက်ထရီများတွင်ပြaနာတစ်ခုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြသည် Samsung ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်တွင်ကြေငြာမည်၎င်း၏စတုတ္ထသုံးလပတ်ဝင်ငွေကြေငြာဖို့ချက်ချင်းမတိုင်မီတစ်ရက်ပဲ။ ဒါ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကလည်းအလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးထပ်မံမဖြစ်စေရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အစီအမံအသစ်များကိုလည်းကြေငြာမှာပါ။
အဆိုပါထောက်ပံ့ပေးသောအမည်မသိအရင်းအမြစ်အရသိရသည် ထုတ်ဝေသတင်းအချက်အလက် ရိုက်တာမှ Samsung သည်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည် အဆိုပါမီးပုံတူပွားနိုင်ခဲ့သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြthemနာများကြောင့်၎င်းတို့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြမရနိုင်ပါ။
ရှင်းနေသည်မှာကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများက Samsung သည် Galaxy Note7စမတ်ဖုန်းများနှင့်မှားယွင်းနေသည့်အရာနှင့်၎င်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်အဆင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောအယူအဆနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြရန် Samsung အတွက်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသဘောတူကြသည်။ သူတို့အားပြproblemsနာများထပ်တလဲလဲထံမှကာကွယ်တားဆီး.
သတိပြုရန်မှာ Samsung Galaxy Note7သည်အချို့သောကျပန်းပစ္စည်းများတွင်ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုများကြောင့်နိုင်ငံတစ်ဒါဇင်တွင်စတင်ရောင်းချပြီးသည့်နောက်စျေးကွက်အတွင်းမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းအဆင့်ပြီးနောက်သို့သော် နေဆဲ, ပြtheနာထပ်ခါတလဲလဲဒါကြောင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုနောက်ဆုံးတော့စွန့်ပစ်ခဲ့သည်, ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးနှင့်ပုံရိပ်တွေကိုပျက်စီးစေ၏။
ဘက်ထရီသည်တရားခံဖြစ်သည်ဟူသောထုတ်ဖော်ချက်သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ရှင်းလင်းချက်အားဖြင့်သံသယများကိုရှင်းလင်းနေစဉ်အကြောင်းရင်းကိုအတည်ပြုသည် ပြproblemနာက software ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ Galaxy Note7မီးလောင်မှုအတွက်ဘက်ထရီသည်အပြစ်ရှိသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်
LG G6 သည် terminal အသစ်ကိုအပူလွန်ကဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုမည်